महिलाहरू, जहाँ आफ्नो प्रशंसामात्र सुन्ने चाहाना हुन्छ, खतरा हुनसक्छ! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > महिलाहरू, जहाँ आफ्नो प्रशंसामात्र सुन्ने चाहाना हुन्छ, खतरा हुनसक्छ!
admin September 2, 2020 जीवनशैली	0
सबै मानिसलाई आफ्नो छबि राम्रो होस् चाहना हुन्छ । आन्तरिक रुपमा मानिस जति नै खराब भएपनि अरुको नजरमा भने असल र चरित्रवान बन्न चाहान्छन् । उनीहरुको मानसिकतामा आफु कसरी राम्रो हुने भन्दा पनि अरुको नजरमा आफ्नो छबि कसरी राम्रो पार्ने भन्ने हुने गर्दछ । यस्तो मामलामा महिलाहरु अगाडी पर्दछन् । महिलाहरु आफुलाई अरुको नजरमा राम्रो देखाउन वा उत्कृष्ट छु भन्ने पार्न खोज्नु एक प्रकारको लत हो ।
यसलाई ‘सुपरवुमेन सिन्ड्रोम’ भनिन्छ । सर्वत्र आफ्नो चर्चा वा हरेक क्षेत्रमा सही छु भन्ने देखाउन खोज्ने लतलाई ‘सुपरवुमेन सिन्ड्रोम’ भनिन्छ । यस लतमा महिला आफुलाई हरेक क्षेत्रमा सही छु भनेर देखाउन खोज्छन् र आफ्ना बारेमा सबैबाट प्रसंशा मात्र सुन्न चाहान्छन् । यो लतको शिकार भएकाहरुले यस प्रकारको अनुभुती गर्न नपाएमा डिप्रेशनसम्म जाने गर्दछन् । यो समस्या, कार्यालयमा काम गर्ने, सामाजिक अभियन्ता, गृहणी लगायतका महिलामा बढि देखिन्छ । विशेष यो समस्या युवा उमेरमा बढि देखिने गर्दछ ।
आफुलाई एक सर्वगुण सम्पन्न महिला भएको भावना विकास हुनु । हरेक क्षेत्रमा जान्ने बुझ्ने महिलाका रुपमा छबि बनाउन खोज्नु । सकेसम्म अरुको ध्यान आफुतर्फ आर्कषित गर्न खोज्नु । आफ्नो प्रशंसा सुन्न अरुलाई खुशी पारेर राख्नु । काम पर्दा बाहेक कसैसंग पनि बोल्न नखोज्नु । बिस्तारै आत्मसम्मान र मनोबल गिर्दै जानु । कसैसंग खुलेर कुरा गर्न नचाहानु ।
आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको धेरै आशा गर्नु हुदैन । यस्तो लतबाट बच्न सबैभन्दा पहिला आफ्नालागी समय निकाल्नु पर्दछ । आफुलाई एक्लो वा आफ्नो साथमा कोहि नभएको महशुस गर्नु हुदैन । सकेसम्म आफुलाई खुसी राख्ने प्रयाश गर्नु पर्दछ ।
त्यस्तै एकै पटक हरेक क्षेत्रमा सफल हुन सकिदैन भन्ने मानसिकता बनाउनु पर्दछ । समयमा खाने, व्यायाम गर्ने समय निश्चित पार्नु पर्दछ । पर्याप्त निन्द्रा सुत्नु पर्दछ । र जीवनलाई उर्जावान् र खुशीमय बनाउनु पर्दछ ।
सुष्मा कार्की र पूजा शर्माको लफडा, कस्को पक्षमा को ? यस्तो छ फ्यानको प्रतिक्रिया ( भिडियो सहित)
के तपाइले देखेकाे सपनाबारे चिन्तित् हुनुहुन्छ? कुन सपना देख्दा कस्तो फल मिल्छ ? कस्तो सपना अरुलाई सुनाउनु हुदैन ? जानी राखौ
गरे के हुदैन नेपालमा? राजधानीकै करोडपति आमाछाेराले गाई पालेरै कमाउँछन मासिक लाखाैं रूपैंया! – भिडियो हेर्नुस्